ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်မှု နယ်ပယ်၏ အကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေထဲက တစ်အုပ်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Getting Things Done စာအုပ်မှတဆင့် နေ့စဉ်စိတ်အတွေးတွေမှာ မသိစိတ်ရဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေ ကင်းဝေးစေရုံသာမက အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး တစ်ကိုယ်ရည် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ မြင့်တက်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ တစ်ကိုယ်ရည်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း တိုးတက်မှုနဲ့ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသူတစ်ဦးဖြစ်သော David Allen ရေးသားထားတဲ့ Getting Things Done စာအုပ်အကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမှာမဆို အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စရပ်များကို ရှာဖွေသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ အဲ့ဒိကိစ္စရပ်တွေ ပြီးမြောက်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ ဇယားတစ်ခု အကြောင်းကို လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြန့်ကျက်တွေးခေါ်တတ်သူ (Growth Mindset) တွေက စာအုပ်ကြီးအတိုင်း တွေးခေါ်တတ်သူ (Fixed Mindset)တွေထက် လူအများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းနဲ့ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲရာမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်နိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဖြန့်ကျက်တွေးခေါ်မှုတွေ ကတဆင့် လူတိုင်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပြီး ပျော်ရွင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာကတော့ ပါမောက္ခ Carol ရေးသားခဲ့တဲ့ တွေးခေါ်မှု အလေ့အထများအကြောင်း “Mindset: the new psychology of success” စာအုပ်ထဲမှ တွေးခေါ်မှု အလေ့အထအကြောင်းကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Great လို့ပြောရလောက်အောင် စွမ်းဆောင်ရည် သိပ်ကောင်းတဲ့ company တွေက သာမာန်အဆင့်အောင်မြင်မှုရတဲ့ Good company တွေထက် သာလွန်ကောင်းမွန်နေတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ စာရေးသူ Jim Collins ဟာ စွမ်းဆောင်ရည် သိပ်ကောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီအမြောက်အများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ပြီးမှ တွေ့ရှိချက်တွေကို ထပ်မံသုံးသပ်ပြီး “Good To Great” စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှ တစ်ဆင့် “Good To Great” စာအုပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါတဲ့ အချက်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ မန်နေဂျာကြီးတွေက ညွှန်းဆိုရတဲ့ စာရေးသူ Jim collin ရဲ့ “Good to Great” ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့ တကယ်စွမ်းဆောင်မှုကောင်းတဲ့ Great ကုမ္ပဏီတွေမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ 1. Disciplined People "စည်းစနစ်ကျနသော လူများ" 2. Disciplined Thoughts စနစ်ကျနတဲ့ အတွေးများနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ တွေးခေါ်ပုံများ 3. Disciplined Action စည်းစနစ်ကျနတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ စတဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို တိုးတက်အောင်မြင်အောင်စေနိုင်တဲ့ အချက်များကို တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်း ကိုယ့်အတွက် ကောင်းကျိုးပေးနိုင်မယ့် နိစ္စဓူ၀ အလေ့အထတစ်ရပ်ကို အချိန်တိုအတွင်း တည်ဆောက်ပြီး အသားကျနေတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာကတော့ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Charles Duhigg ရေးသားခဲ့တဲ့ “Power of Habit” စာအုပ်မှာ ပါတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ မကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ အချက်များကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။